दुधमा बेसार मिसाएर खानुको १२ फाइदाहरु थाहा पाउनुहोस ।
आयुर्वेदमा बेसारलाई सबैभन्दा राम्रो प्राकृतिक एन्टि’बायोटिक भनेर व्याख्या गरिएको छ। यसैले छाला, पेट तथा अन्य रोगका लागि यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ।
त्यस्तै दुधमा पनि प्राकृतिक एन्टि’बायोटिक रहेको हुन्छ । यसले शरीरमा हुने प्राकृतिक संक्र’मणलाई रोकथाम गर्दछ। यदि बेसार र दुधलाई मिसाएर सेवन गर्ने हो भने हाम्रो शरीरलाई यस्ता फाइदा हुन्छन्
१.दैनिकरुपमा एक गिलास दुधमा आधा चम्चा बेसार मिसाएर खाँदा प्रयाप्त मात्रामा क्या’ल्सियम प्राप्त हुन्छ । जसका कारण गर्दा हड्डी स्वस्थ तथा मजबुत हुन्छ।
२.बेसार र दुध मिसाएर खाँदा शरीरका जो’र्नी दुख्ने समस्या पनि हट्छ । यसबाहेक बाथ’रोगका कारण हुने सुजनलाई पनि कम गर्दछ।
३.दुध र बेसारको प्रयोगले हाम्रो शरीरमा भएका हानि’कारक तत्व बाहिर निस्कन्छन्। विशेषगरी रगतमा भएको हानि’कारक तत्व तथा कले’जोलाई सफा राख्न बेसार र दुधले सहयोग गर्दछ।
४.बेसार हालेको दुध खाने हो भने क्यान्सरका कारण मानव कोषमा भएको डिएनएमा पर्ने असर वा हानीलाई रोक्दछ भन्ने एउटा अध्ययनले देखाएको छ। यस बाहेक क्या’न्सर उपचारमा प्रयोग गरिने के’मोथेरापी प्रविधिको साइड इफे’क्टलाई कम गर्दछ।
५. दुध र बेसार सेवनले कान दुख्ने समस्या पनि समाधान हुन्छ । शरीरमा रक्त सञ्चारलाई बढाएर कान दुख्ने पी’डा कम हुने गर्दछ।
७. आयुर्वेद अनुसार बेसार प्रयोग गर्ने हो भने हाम्रो रगत सफा हुन्छ । यसले रक्त सञ्चारलाई मजबुत बनाउनुका साथै रक्त’नलीलाई सफा राख्दछ । यसबाहेक रगत पातलो बनाउन पनि सहयोग गर्दछ ।
८. दैनिक एक गिलास दुधमा आधा चम्मा बेसार मिलाएर पिउने हो भने शरीरमा भएको अनावश्यक बोशो कम हुन्छ । यस कारण मोटो’पन घटाउन पनि बेसार र दुध प्रयोग गर्न सकिन्छ।
९. छालासम्बन्धी विभिन्न सम’स्याबाट छुटकारा पाउनका लागि बेसार हालेको दुध उपयोगी मानिन्छ।
१०.दुध र बेसार मिलाएर सेवन गर्ने हो भने पेटसम्बन्धी विभिन्न रोग निको हुन्छन्। पखला लाग्ने, पेट दुख्ने, ग्याष्ट्रिक तथा अल्सर जस्ता समस्याबाट पी’डित बि’रामीलाई बेसार अमृत समान मानिन्छ।
१२.चिसोका कारण रुघा’खोकी लाग्ने मानिसले बेसार तथा दुध मिसाएर खाने हो भने चाँडो निको हुन्छ।
२०७७ चैत्र १४, शनिबार १६:४९ गते 1 Minute 1545 Views